%AM, %02 %322 %2016 %06:%May Published in The Person
%AM, %29 %232 %2016 %04:%Apr Published in The Person
ဆလိုင်းဆွန်ကျဲအို၊သည် မြန်မာပြည်တွင် ၁၉၇၅ ခုနှစ်လောက်မှ စပြီး ချစ်းလူမျိုး အဆိုရှင်တစ်ဦးအနေဖြင့်၎င်း၊ တေးရေးဆရာ အနေဖြင့်၎င်း ထင်ရှားကျော်ကြားသူတစ်ဦးဖြစ်သည်။ သူသည် ၁၉၅၇ ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီလ (၁၃) ရက်တွင် ချင်းပြည်နယ်၊ ဖလမ်းမြို့နယ်ရှိ လိုးကျွမ်ကျေးရွာ(Lo Cawm) တွင်မွေးဖွားသည်။ ၁၉၆၈-၇၀ ၀န်းကျင် အထက်တန်းကျောင်းသားဘ၀တွင် ဂစ်တာစတီးကာ “I it hnak i si” ဟူသော ချင်းသီချင်းကို ပထမဆုံးရေးသားခဲ့ပါသည်။ ၁၉၇၇ ခုနှစ်တွင် မန္တလေးတက္ကသိုလ်တွင် B.Sc. in Zoology majoring Ichthyology တက်ခဲ့သည်။
%AM, %29 %141 %2016 %02:%Apr Published in Health
%AM, %28 %182 %2016 %03:%Apr Published in The Person
%PM, %27 %765 %2016 %17:%Apr Published in The Person
%AM, %27 %460 %2016 %10:%Apr Published in Education
House of Prayer (Taingen)
%AM, %27 %449 %2016 %09:%Apr Published in Religious
ချင်းခရစ်ယာန် ရာပြည့် အထိမ်းအမှတ် ဆုဆောင်းဆောင်။
ချင်းပြည်နယ်၊ ခေါ်ဆ နှစ်ခြင်းအသင်းတော်ရှိ ယုံကြည်သူ ချင်းလူမျိုးများ၏ ချင်းခရစ်ယာန်ရာပြည့် အထိမ်းအမှတ်ပွဲတော်နှင့်အတူ Zomi Baptist Convention (ZBC) Triennial ကို ကျင်းပ ပြုလုပ်ရန် စီစဉ်ခဲ့ရာ တာဝန်ရှိသူများ အချိန်နှင့်အမျှ အစည်းအဝေးပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်။ ၂၀၀၃ ခုနှစ် မေလ (၈) ရက်Chin Christian Centenary comittee ၏ ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးတွင် ZBC- E&M Secretary ဖြစ်သူ Rev. Pa Hrang Hmung ထံသို့ SRBA-E&M မှ ဆုတောင်းတောင် ရူပါရုံကို တင်ပြခဲ့သည်။ ထိုမှ ZBC-OC, EC, BM အစည်းအဝေးများသို့ အဆင့်ဆင့် ဆွေးနွေးဆုံးဖြတ်အတည်ပြုခဲ့သည်။
%AM, %27 %398 %2016 %08:%Apr Published in Seino Articles
%AM, %27 %361 %2016 %07:%Apr Published in News
%AM, %27 %321 %2016 %06:%Apr Published in Tech